कफि पिउनाले मधुमेहका रोगीदेखि वजन घटाउनेसम्मलाई हुने ५ फाइदा:: Naya Nepal
कफि पिउनाले मधुमेहका रोगीदेखि वजन घटाउनेसम्मलाई हुने ५ फाइदा
एजेन्सी । विश्व कफी दिवस प्रत्येक वर्ष १ अक्टुबरमा मनाइन्छ । यो मनाउने उद्देश्य कफि व्यवसायलाई प्रमोट गर्नु हो । कफिले शरीरमा तत्काल ऊर्जा दिन काम गर्दछ । यही कारणले अधिकांश व्यक्तिहरू आफ्नो दिनको सुरुवात कफी पिएर गर्छन्। यस बाहेक, कफी पिउनका अन्य धेरै फाइदाहरू छन् ।
कलेजोका लागि फाइदाजनक भएको विज्ञहरुको बताएका छन् । स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार दुध, चिनी बिना दिनमा दुई वा तीन कप कफी पिउँदा कलेजोको रोगको जोखिम कम हुन्छ । विज्ञका अनुसार कफिले कलेजोको क्यान्सर हुने सम्भावना पनि कम छ । यदि कसैलाई पहिले नै कलेजोको रोग छ भने पनि कालो कफी पिउँदा पनि उनीहरूको लागि लाभदायक हुनेछ ।
वजन घटाउँछ कफी मद्दत गर्छ । कफीमा म्याग्नीशियम र पोटेशियम पाइन्छ । यी दुवै चीजहरूले मोटाई नियन्त्रण गर्दछ ।
कफी मुटुसम्बन्धी रोगहरूमा फाइदाजनक मानिन्छ । कफीको सेवन मुटु रोगीहरूका लागि पनि धेरै फाइदाजनक हुन्छ । कफिले पनि हृदयघातको जोखिम कम गर्दछ ।
कफी सेवन गर्नाले मधुमेह बिरामीहरूका लागि लाभदायक हुने चिकित्सकहरु बताउछन् । मधुमेह आज विश्वभरी एउटा साधारण समस्याका रुपमा धेरैमा रहेको छ । कफीमा पाइने क्याफिनले रगतमा चिनीका मात्रा कम गर्दछ । त्यसकारण, बिरामीहरूका लागि कफी उपभोग गर्नु लाभदायक छ ।
कफी नियमित पियनेको छालामा लाग्ने रोगहरु लागि पनि लाभदायिक हुने चिकित्सकहरु बताउछन् । कफिमा पाइने क्याफिनले आँखाको एलर्जी र अँध्यारो घेरा पनि हटाउँछ । त्यसकारण यो भनिन्छ कफी पिउँदा छाला राम्रो हुन्छ । यो मात्र होईन, कफि फेसप्याक प्रयोग गर्नाले छाला पनि सुधार गर्दछ।
यसकारण असन्तुष्ट छन् दाहाल
काठमाडौं । नेकपाभित्र राजदूत नियुक्ति प्रकरणले असन्तुष्टि जन्माएको छ। सरकारले पार्टीको सल्लाहविना राजदूत नियुक्त गरेपछि असन्तुष्टि देखिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूतलगायतका नियुक्ति अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सल्लाहबिना गरेपछि बिहीबार हुने भनिएको दुई अध्यक्षको भेटघाटसमेत रोकियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत र अमेरिकाको राजदूतमा क्रमशः निवर्तमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्नेगरी सिफारिस गरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै दाहालले बिहीबारको भेट रद्द गरेको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत र अमेरिकाको राजदूतमा क्रमशः लोकदर्शन रेग्मी र डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गर्नेगरी सिफारिस गरेपछि दाहालले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग पूर्वनिर्धारित भेट रद्द गरेका छन्।
‘राजदूत नियुक्तिको सल्लाह पनि भएन, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा पनि अलमल छ, सल्लाह र सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन, त्यसैले बिहीबार दिउँसो हुने भनिएको भेटवार्ता भएन’, दाहालनिकट स्रोतले भन्यो।
वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले पछिल्लो नियुक्ति प्रकरणले ओलीको पुरानै स्वभाव हावी भएको विश्लेषण गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री ओलीको पुरानो स्वाभावलाई लिएर हामीले कुनै टिप्पणी गर्नु छैन। प्रधानमन्त्रीका कतिपय अधिकारका कारण पार्टीले सैद्धान्तिक कुरामात्रै गर्ने हो। यसै गरौं भनेर दबाब दिने ठाउँ छैन’, नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। उहाँले भन्ने एउटा हो गर्ने त अर्के छदैछ नि।’ ओली–दाहालबीच भागबन्डा मिल्दासम्म ठीकै थियो तर राजदूत नियुक्तिमा भागबन्डा नमिलेपछि दाहालले असन्तुष्टि राखेको उनले बताए। उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा नियुक्ति गर्दा पनि दुई अध्यक्षले माधव नेपालसँग परामर्श गर्न जरुरी ठानेका थिएनन्।
ओली र दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि मापदण्ड बनाउने विषयमा विवाद बढेको थियो। ओलीले आफू निकटका व्यक्तिलाई मन्त्री कायमै राख्ने योजना बनाएका छन् भने दाहालले एकपटक सबैलाई फिर्ता गरेर दोहो-याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। मापदण्ड बनाउने विषयमै कुरा नमिलेपछि बुधबार हुने भनिएको भेटवार्ता पनि स्थगित गरिएको थियो। दुई दिनदेखि ओली र दाहालबीच छलफल हुन सकेको छैन।